အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို နိုင်ငံတကာ တရားရုံးသို့တင်ပို့ တရားစွဲသင့်သည် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဘဝ တစွန်းတစပြောပြမယ်
Wirathu challenged Myanmar Muslim Community with aggressive word »
အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို နိုင်ငံတကာ တရားရုံးသို့တင်ပို့ တရားစွဲသင့်သည်
နိုင်ငံတကာ တရားရုံးသို့တင်ပို့ တရားစွဲသင့်သည်
အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အနေနှင့် သူ၏ဒုတိယလူ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေး သူ့ ကိုကာမပြန် မတော်လှန် ဖြုတ်မချနိုင်ရန် အတွက် တပ်မှဗိုလ်ချုပ်ငယ်များကို လက်သပ်မွေးထားရပါသည်။
၄င်းတို့ ထဲမှ ထက်မြက်အလားအလာရှိပြီး သူ့ ကိုဖြုတ်ချရန်ကြံစည် လာနိုင်သော စစ်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း ခင်ညွှန့် ကိုဖြုတ်ချခဲပါသည်။
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအပြီး၌ တကမ္ဘာလုံးနှင့်မြန်မာပြည်သူ တို့ ၏ဖိအားပေးမှုကြောင့်ရာထူးမှ အနားယူသည်ဟုကြေငြာပြီး နောက် ကွယ်မှသာကြိုးကိုင် အမိန့် ပေးမှုများပြုလုပ်နေခဲ့သည်။
တပ်မတော်စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဌာန အကြီးအကဲတဦး အနေနှင့် အစိုးရသစ်က သူ့ ကိုပြန်လည်ပုန်ကန်မှုမပြုနိုင်ရန် ကြိုတင်၍ အကွက်စေ့စေ့အစီအစဉ်ချခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်တို့ ကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ချ၍ သေသည်အထိ အကျယ်ချုပ်ချခဲ့သလို သူ့ တပည့်များကအတုခိုး မလုပ်နိုင်ရန် သေချာစဉ်းစား၍ အစီအမံများပြုထားပါသည်။
ထို့ ကြောင့် သူအငြိမ်းစားယူချိန်၌ သူ၏ဒုတ်ိယလူ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေး ကိုလည်းအငြိမ်းစားယူရန်ဖိအားပေး စီစဉ်ခဲ့သည်။ထို့ နောက်ရာထူးငယ် ဗိုလ်ချုပ်အချို့ ကိုအဆင့်တူ အာဏာတူများ- ဥပမာ – ၂(က) ၊ ၂(ခ)၊ ၂(ဂ)၊၂(ဃ)၊၂(င) နှင့် ၂(စ) စသည်ဖြင့် သူ့ အောက်နံပါတ်နှစ်များ အဖြစ်ခန့် အပ်ခဲ့ပြီး တဦးကိုတဦး အပြန်အလှန်စောင့်ကြည့် ထ်ိမ်းချုပ် ၍ အင်အားချိန်ခွင်လျှာညှိထားရန်စီမံခဲ့ပါသည်။
သမတဦးသိန်းစိန်၊ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၊လွှတ်တော်နာယက ဦးရွှေမန်း၊ ကြံ့ဖွတ်ဥက္ကဌ ဦးဌေးဦး၊ ဦးအောင်သောင်း နှင့်ဦးအောင်မင်း အစရှိသော ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကို လုပ်ပိုင်ခွင့်တန်းတူ ပေး၍ အင်အားထိန်း ညှိထားခဲ့သည်။
၄င်းတို့ ထဲက တဦးနှင့်တဦးက သစ္စာဖောက်အာဏာမသိမ်းနိုင်ရန် အကြံကြီးကြံ၍အကွက်ချထားခဲ့သည်။ နောက်ကွယ်ကကြိုးကိုင်သူကြီးက
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံတွင် သူ့ တပည့် များကို အပျော့ဂိုဏ်း၊အမာဂိုဏ်းခွဲ၍ စနစ်တကျအုပ်ချုပ်စေခဲ့သည်။
သို့ သော် ၁၀၁၂ ဧပြီလကြားဖြတ်ရွေးကော်ပွဲအပြီး၌ အာဏာရကြံ့ဖွတ် ပါတီ အပြတ်အသတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် ကတိပေးထားသော ၂၀၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ်မရှုံးနိုင်ရန် အများ ပြည်သူ၏
အမျိုးဘာသာ သာဿ နာ ချစ်စိတ်များကို အသုံးပြု၍ ဒီချုပ်ထံ မှမဲများရရန် စတင်ကြံစီပါတော့ သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက သူ၏ညာလက်ရုန်း ဦးအောင်သောင်း ကိုခေါ်၍ သူ၏တောင်သာတပ်မတော်ခေါ် စွမ်းအားရှင်တို့ ကို အသုံးပြု၍ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုန်းများကို ဖန်တည်း ရန်တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
ကြံ့ဖွံ့လက်အောက်မှာ ရာဇဝတ်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ‘စွမ်းအားရှင်’ ဆိုတဲ့ လူမိုက်အဖွဲ့ရှိတယ်- –
Reference: Unmasking Burma’s Tyrant by Benedict Rogers & Jeremy Woodrum
Translated by Andrew Soe
ဦးအောင်သောင်းသည် ဦးခင်ညွှန့် သင်္ကန်းဝတ်စေပြီး ထည့်ထားသော
စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းသံဃာတုများကို အသုံးပြု၍ ၉၆၉ ( နောင်အခါ မဘသ ဟုပြောင်းလဲအမည်ပေး ) ကို ဖွဲ့ စည်း၍ အစ္စလာမ်ဆန့် ကျင်ရေးအမုန်း တရားများဟောပြော ဖြန့် ဝေသည့်အပြင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် အထိကရုန်းများ ဖန်တည်းစေခဲ့ပါသည်။
ဤသို့့ဖြင့် တောင်ကုပ်၌့ မြန်မာမွတ်စလင် ဘုရားဖူး ( တဘလိဂ်အဖွဲ့ ) တို့ ကိုအစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ မိတ္ထီလာမှ မြန်မာမွတ်စလင်များကို အစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု၊ ရန်ကုန်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းမှ ကျောင်းသားငယ်များကို မီးရှို့ သတ်ဖြတ်မှုမှ စ၍ မြန်မာပြည် အနှံ့ အပြား မွတ်စလင်ဆန့် ကျင်ရေးအကြမ်း ဖက်မှုမျိုးစုံကို စနစ်တကျ အကွက်ချ၍ ကျူးလွန်စေခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံမှ အမိန့် အရကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုများ ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာအစိုးရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် မြန်မာစစ်တပ်မှ မတားဆီးဝံ့ပဲ လက်ရှောင်နေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်များအပေါ် အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုမျိုးစုံ လုပ်နေမှုများကို စွမ်းအားရှင်နှင့်အောင်သောင်းကသာ လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို မြန်မာ လူထု မီဒီယာများနှင့် ကမ္ဘာကသိနေကြပါပြီ။ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနှင့် အပြစ်မရှိဟု လွဲမှားစွာထင်နေသူများ များစွာရှိပါသည်။ ဦးသိန်းစိန်၊မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ဦးရွှေမန်းတို့ မပါဝင် အပြစ်မရှိဟု လွဲမှားစွာထင်နေကြပါသည်။ COMMAND RESPONSIBILITY ခေါ် အမိန့် ပေးနိုင်မှုအာဏာ ထိပ်ဆုံးရှိသူတို့ မှာ၎င်းတို့ လ လက်အောက် အဖွဲ့ ဝင်များ လုပ်ဆောင်မှု အတွက်တာဝန်ရှိသည်၊ အပြစ်ရှိသည်။ ၄င်းအပြင် ပြစ်မှုဥပဒေအရ OMISSON OF DUTY ခေါ်တာဝန်ရှိသူ၏ တာဝန်ပျက်ကွက်မှု မှာ ရာဇ၀တ်ကြောင်းအရ အပြစ်ရှိပါသည်။ ဥပမာ – သမတ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ရဲချုပ်၊ ကာချုပ် အစရှိသူတို့ သည် က၄င်းတို့ အကာအကွယ်ပေးရန် ပျက်ကွက်မှု၊ ရာဇ၀တ်သားများအပေါ် ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးရန် ပျက်ကွက်မှုကို ကျူးလွန်၍ ၄င်းတို့ မှာတာဝန်ပျက်ကွက်မှုဟူသော ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ရာရောက်၍ ဥပဒေအရ အပြစ်ပေးခံကြရနုင်ပါသည်။
လက်နက်မဲ့အရပ်သား များကို အနိုင်ကျင့်ခြင်းပြစ်မှုများကို ၄င်းတို့ ၏တာဝန်ခံအထက်အရာရှိ အုပ်ချုပ်သူများက တာဝန်ယူရမည်။ အာဏာပိုင် အထက်အရာရှိများဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်မှစ၍ အဆင့်ဆင့်ထိပ်တန်း စစ်တပ်အရာရှိများ သာမာ – အရပ်ဖက်အစိုးရက ၄င်းတို့ ခွင့် ပြုထားသဖြင့် သမတကြီးဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရတဖွဲ့ လုံးအနေနှင့်တာဝန်ရှိသည်။ တာဝန်ခံအထက်အရာရှိအဆင့်ဆင့်ကို နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေအရ အရေးယူအပြစ် ပေးနိုင်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်။ ၄င်းကို COMMAND RESPONSIBILITY ဟုခေါ်၍ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး၌ ရာပေါင်းများစွာသော ဂျာမာန်နှင့် ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ၀န်ကြီးများကို ၄င်းတို့ ၏ငယ်သား များ၏စစ်ရာဇ၀တ်များအတွက် အပြစ်ရှိသည်ဟု ဆုံးဖြတ်၍ သေဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
“အစွယ်လိုသူ မိဖုရား၊ အသွားစေခိုင်းသူ မင်းဧကရာဇ်၊ လေးပစ်သူက ဘုရားကျွန်တော်၊ ကြံဖော်ကြံဖက် ဤသုံးယောက်အနက်တွင်မှ၊ ငမိုက်သားမုဆိုးလေ၊ နင်ချည်းပင်သေပေရော့”
ဂုဏ်ယူပါတယ် ၀ီရသူ ၀ီရသူကြောင့် – ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက် ရိုင်းစိုင်းသော ဘာသာဖြစ်ရပြီ။ ၀ီရသူကြောင့် – စစ်အစိုးရ လက်သွေးစွန်းပြီး လည်ပင်းကြို့းကွင်းစွပ်နေပြီ။ သမတ ဦးသိန်းစိန်က – ၀ီရသူသည် ဘုရားသားတော်ဟု ကာကွယ်ခဲ့သည် ၀ီရသူကို ထောင်မှ လွှတ်ပေးခဲ့သည် မွတ်စလင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမလုပ်ရန် တားခဲ့သည်၊ နှောက်ရှက်ခဲ့သည် ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးခြင်း မလုပ်ပဲ လွှတ်ပေးထားသည်
ခင်ဗျား အမြဲပြောနေတဲ့ ကိုဇာဂနာ အကြောင်းမှန်ပါတယ်လို့ကိုဇာဂနာက သွယ်ဝိုက်ဝန်ခံလိုက်ပါပြီ ။ ရခိုင်ကိစ္စ ( သီတာထွေး မုဒိမ်းကျင့် မခံရပဲဆွပေးခြင်း၊ ရိုဟင်ဂျာ လူမျုိုးပြုန်းသတ်ဖြတ်မှု၊ တောင်ကုပ် မှာ ခရီးသွားမွတ်ဆလင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်း ) ၊ မိတ္ထီလာကိစ္စ ၊ လားရှိုးကိစ္စ တွေဟာ လည်း စစ်အစိုးရ – ဇာတ်ဆရာအလိုကျ ရေးထားတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းအတိုင်း ကကျရတာပါတဲ့
သီတာထွေး မုဒ်ိမ်းအကျင့်မခံခဲ့ရပါ ဆေးစစ်သူ ဆရာဝန်၏ ထွက်ဆိုချက်ကို၊ ကိုဇာဂနာက ဗီဒီယိုရိုက်ထားခဲ့သည်။ ထိုဆရာဝန်ကို ခြိမ်းခြောက်၍ ဆေးစာအလိမ် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားခံ ထက်ထက်မှာ – ရိုဟင်ဂျာ မဟုတ် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ် မွတ်စလင်ပင် မဟုတ် ထက်ထက် အချုပ်ထဲတွင် အသတ်ခံလိုက်ရသည် ထက်ထက် ဇနီးလည်း ရေတွင်းထဲကျသေသွားသည် စစ်အစိုးရက အမှန်းဓာတ်ဆီ ပက်ထားပြီး သီတာထွေးအလောင်းကို စံနက်တံအဖြစ် သုံး၍ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ အောင်သောင်း၏ စွမ်းအားရှင်အကြမ်းဖက်အုပ်စုက တောင်ကုပ်ခရီးသွား မွတ်ဆလင်များကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ အလောင်းများပြန်ပေးမိခဲ့သော အမှားများကြောင့် အင်တာနက်၌ မြင်မကောင်း ရှုမကောင်း အလောင်းများ ပြန့် နှံ့ ခဲ့ရသည်ကို သင်ခန်းစာယူ၍ ထောင်နှင့်ချီ၍ သတ်ထားသော ရိုဟင်ဂျာ အလောင်းများကို၎င်း ရာနှင့်ချီ၍ သတ်ထားသော မိတ္ထီလာ မြန်မာမွတ်ဆလင် အလောင်းများကို၎င်း ပြန်မပေးပဲ အစဖျောက်ခဲ့သည်။ ဘာသာရေးအရပင် သရနဂုဏ်တင်ခွင့်ပင် မပေးခဲ့ကြပါ။
မဘသ = မြန်မာ့အဘများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း = 969
မဘသ = Ma Ba Tha = မြန်မာ့အဘများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း
မဘသ = Ma Ba Tha = မြန်မာ့အဘများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း = 969
မဘသ = Ma Ba Tha = မြန်မာ့အဘများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း = Swarn Arr shin
ကြံ့ဖွံ့လက်အောက်မှာ ရာဇဝတ်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ‘စွမ်းအားရှင်’ ဆိုတဲ့ လူမိုက်အဖွဲ့ရှိတယ်-
မဘသ = Ma Ba Tha = မြန်မာ့အဘများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း= 969 = Swarn Arr Shin.
This entry was posted on March 26, 2015 at 11:05 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို နိုင်ငံတကာ တရားရုံးသို့တင်ပို့ တရားစွဲသင့်သည်”
March 27, 2015 at 11:50 am | Reply
Andrew Soe added5new photos.
“ရက်စက်တဲ့နေရာနဲ့ ညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့သူ နှစ်ဦး”
လွတ်လပ်ရေးရပြီး မြန်မာပြည်မှာ မင်းဆိုးမင်းညစ်
(၂) ဦး ကြီးစိုးတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေဖြစ်
တယ်။ ရက်စက်တဲ့နေရာနဲ့ ညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့တဲ့နေရာ
တိုက်ဆိုင်ပုံကတော့ (၂) ဦးစလုံး စာတိုက်စာရေး
ဘ၀က အာဏာရှင် မင်းဆိုးမင်းညစ်ဖြစ်လာတာပဲ။
အသက် (၉၀) အရွယ် ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ နေအိမ်မှာ
အကျယ်ချုပ်နဲ့နေရင်း သေဆုံးသွားတယ်။ ပြည်သူ
ပြည်သားတွေ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်အောင်
ဗိုလ်သန်းရွှေလက်ထက်မှာ အစိုးရတပ်ဟာ မုဒိမ်း
တပ်မတော်ဆိုတဲ့ အမည်သစ်ကို ရလိုက်တယ်။
အစိုးရအမှုထမ်းအားလုံးကို သူခိုးဖြစ်အောင် လုပ်
တဲ့နေရာမှာလည်း ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ
ဗိုလ်နေ၀င်း အတ္ထုပ္ပတ္တိကို တပည့်ကျော်ကပ်ဖားကြီး
တယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေကိုတော့ ရေးမယ့်သူမရှိဘူး။
မယ်မယ်ရရ ဘာမှ စွမ်းဆောင်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲ
အကြီးအကဲဖြစ်လာတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေကို ဘယ်သူ
အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ရသူတွေ သန်းချီရှိနေ
ပေမယ့် သူ့အကြောင်းကို ကမ္ဘာက မသိကြဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ စာတိုက်စာရေးဘ၀က အလွန်ဆိုးဝါး
တဲ့ အာဏာရှင်ဖြစ်လာတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေအကြောင်း
ကို Benedict Rogers နဲ့ Jeremy Woodrum
တို့က စာအုပ်ရေးပြီး မကြာမီက ထုတ်ဝေလိုက်
စာအုပ် အမည်ကတော့ Unmasking Burma’s
Tyrant (မင်းဆိုး မင်းညစ်) by Benedict Rogers
& Jeremy Woodrum တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေအကြောင်းက နည်းနည်း ဆက်စပ်
နေတဲ့ သမိုင်းနောက်ခံကို ဖော်ပြတာက များ
တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် ရည်
ရွယ်တာမို့ နောက်ကြောင်းတွေကို ရှင်းပြနေတာ
ချက်က မြန်မာစာမြန်မာစကား မတတ်တာပဲ။
နဲ့ ဘလော့ခ်တွေရှိပေမယ့် မြန်မာစာမတတ်တော့
မသိကြဘူးပေါ့။ ဥပမာ “ဖိုးတရုတ်ဘလော့ခ်”
ဆိုရင် စစ်တပ်ရဲ့ အတွင်းသတင်းတွေကို ဖော်
ကတော့ နိုင်ငံခြားအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အမြင်ကို
တင်ပြနိုင်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မြန်မာပရိသတ်
သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ နောက်ကြောင်းကို မတင်ပြ
ဘဲ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ ပတ်သက်တာကိုသာ လို
ဗိုလ်သန်းရွှေကို ၁၉၃၃ က မွေးဖွားတာ
မို့ အခုဆိုရင် (၈၂) နှစ်ရှိနေပါပြီ။
လို့ အခြေခံပညာအလယ်တန်း (သို့မဟုတ်)
ဒါကြောင့် ကျောက်ဆည်နယ်သား ၀န်ကြီးတွေ
ဖြစ်တဲ့ ဦးသောင်းနဲ့ ဦးအောင်သောင်းကို လူရင်း
အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
စစ်ဗိုလ်ဘ၀မှာ စကားနည်းပြီး အထက်အရာရှိ
ချိန်မှာ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ ငြိမ်ကုတ်နေတတ်
မဆလပါတီနဲ့ စစ်တပ်ကို ဗိုလ်သန်းရွှေက
လုပ်ဖို့သာ အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာမို့ ရာထူး
တက်တာလို့ ဆိုကြတယ်။ မိမိရည်မှန်းချက်
၁၉၅၆ မှာ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ်။
ပအို့တိုင်းရင်းသူ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ဟာ ခင်ပွန်းစစ်ဗိုလ်
ကျဆုံးသွားလို့ မုဆိုးမ ဖြစ်နေသူပါပဲ။ စစ်ဗိုလ်တဦး
ကျဆုံးသွားလို့ ကျန်ရစ်သူဇနီးသည်ကို နောက်စစ်
ဗိုလ်တဦးက ဆက်ယူတာမျိုးဟာ စစ်တပ်ထဲမှာ
ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကိုလက်ထပ်ဖို့ စစ်ဗိုလ်တွေ ကံစမ်း
မဲနှိုက်တဲ့အခါ ဗိုလ်သန်းရွှေမဲပေါက်သွားလို့ ယူရ
တချို့ကလည်း တပ်ရင်းမှူးစီစဉ်တာကို မငြင်းချင်
တဲ့အတွက် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကို ယူလိုက်တာလို့ ပြော
ကြတယ်။ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့ ငယ်အမည်က အကြိုင်
ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ရပြီးတော့မှ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်
ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ပထမယောက်ျားရတဲ့ ကလေးပါ
ဆိုရင် ဗိုလ်သန်းရွှေမှာ သားသမီး (၈) ယောက်
ရှိတယ်။ ဒီ (၈) ယောက်စလုံးကို စစ်အစိုးရနဲ့
ဗိုလ်သန်းရွှေ မိသားစု စီးပွားရေးသောင်းကျန်းပုံ၊
လောဘကြီးပုံတွေကို လူပြောများလို့ ပြည်သူ့ချဉ်
ဖတ် ဖြစ်နေတာ ထင်ရှားတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့
သမီး သန္တာရွှေမင်္ဂလာဆောင်မှာဝတ်ဖို့ လက်ဝတ်
ရတနာတွေ ငှားလိုက်တဲ့ မိုးကုတ်သူဌေး မိသားစု
တစုလုံး ရန်ကုန်မှာ ၂၀၀၈ ခုက အသတ်ခံလိုက်ရ
တာဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေမိသားစု လောဘဇောတိုက်
နေတာနဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်တွေလည်း
သန္တာရွှေ လက်ဝတ်ရတနာတွေ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်
၀တ်စားထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ခရစ်စမတ်သစ်ပင်နဲ့
တူတယ်လို့ စင်ကာပူ မင်းဆရာ လီကွမ်ယူးက
မျက်နှာမှာ အောင်မြင်မှုဆိုလို့ ဗိုလ်သန်းရွှေမှာ
အရှုံးနဲ့ နိဂုံးချုပ်တယ်။ ဗိုလ်အောင်ဖုန်း ဦးစီးတဲ့
မိုင်းရန်တိုက်ပွဲတခုမှာသာ ဗိုလ်သန်းရွှေက ဗကပ
တပ်ကို နိုင်လိုက်တယ်လို့ ဗကပဟောင်း ဦးအောင်
ကျော်ဇော ပြောတာကို ကိုးကားထားတယ်။
ဗိုလ်အောင်ဖုန်းဟာ နောင်အခါမှာ သစ်တော
လက်နက်အင်အား မကောင်းတာကြောင့် ဗိုလ်
သန်းရွှေဟာ တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရ
၁၉၈၀ ဇွန်လ (၂၀) မှာ ဗကပနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့
(၆) ရက်တိုက်ပွဲကို ကျိုင်းတုံကနေ စစ်ကူသွားဖို့
ဗိုလ်သန်းရွှေကို အမိန့်ပေးတဲ့အခါ ဗိုလ်သန်းရွှေ
ဟာ (၂) ရက် ရေဒီယိုအဆက်အသွယ်
ဗိုလ်ချုပ်လှဦး ဒေါသဖြစ်ပြိး ဗိုလ်သန်းရွှေကို
ရာထူးက ထွက်ခိုင်းကြောင်း ဦးအောင်ကျော်ဇော
က ပြောပြတယ်။ ဗကပက ကြားဖြတ်နားထောင်
မှာစိုးလို့ ရေဒီယိုဆက်သွယ်စက်ကို ပိတ်ထားတာ
ဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်သန်းရွှေက ဆင်ခြေပေးတယ်
စစ်မြေပြင်မှာ အောင်မြင်မှုမရပေမယ့် အထက်ကို
အမြဲလေးစားတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေ အလုပ်မပြုတ်ဘူး။
စစ်တိုက်တော်သူကို ဗိုလ်နေ၀င်းက မြှောက်စား
တာမဟုတ်ဘဲ ကျိုးနွံသူကိုသာ လက်သပ်မွေး
ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ သူ့ဆရာ ဗိုလ်ချုပ်အေးကိုကြောင့်
အလုပ်မပြုတ်ဘဲ တပ်ရင်းမှူးဘ၀က တိုင်းမှူးဖြစ်လာ
သဘောကောင်းတဲ့ တိုင်းမှူးအဖြစ် ဗိုလ်သန်းရွှေကို
မှတ်မိသူတွေရှိပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေကို စစ်တပ်နဲ့
အထက်အကြိုက်လိုက်လုပ်ရင်း ၁၉၈၅ မှာ
ဆန္ဒပြသူတွေကို သတ်ဖြတ်ရာမှာ ဗိုလ်သန်းရွှေ
လည်း တာဝန်မကင်းဘူးလို့ သိရတယ်။
လှယ် ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဗိုလ်ခင်ညွန့်
က ဦးဆောင်ပြီး စစ်အာဏာ သိမ်းပေမယ့် ဗိုလ်ခင်
ညွန့်ဟာ စစ်တပ်အတွေ့အကြုံ မရင့်ကျက်တာ
ကြောင့် န၀တ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို ဗိုလ်သန်းရွှေ
န၀တအစိုးရ တက်လာပြီး မကြာမီ ရွေးကောက်ပွဲ
ကျင်းပပြီး အနိုင်ရတဲ့ပါတီကို အာဏာလွှဲပေးမယ်
လို့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်က ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ (၂၂)
အနိုင်ရတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက အစိုးရ
ဖွဲ့လိမ့်မယ်လို့ ၁၉၈၉ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့က
ပြောတယ်။ နောက်တခါ ဇူလိုင်လ (၅) ရက်နေ့
မှာ တခါထပ်ပြီး မဲအများဆုံးရသူက အစိုးရဖွဲ့နိုင်
မယ်ဆိုရင် အာဏာလွှဲပေးပြီး အစိုးရသစ်ကပဲ
ဒါပေမယ့် ၁၉၉၀ မေလ (၂၇) ရက်နေ့ကျင်းပတဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ ဦးဆောင်နေစဉ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
သန်းရွှေဟာ အစည်းအဝေးမှာ စကားတလုံးမှ
မပြောဘဲ နေတတ်တယ်လို့ အနောက်တိုင်း
စိတ်မမှန်တဲ့အခါမှာ ဖြုတ်ပစ်ဖို့တွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
သန်းရွှေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့က ပူးပေါင်းကြံစည်
၁၉၉၂ ဧပြီလ (၂၃) ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ န၀တ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကို ဆက်ခံ
တယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ ကြာရှည် ခံမှာ မဟုတ်
ဘူးလို့ အများက မြင်ကြပါတယ်။
အထင်ကြီးကြတယ်။ သစ္စာရှိ ကျွန်ယုံသဘော
မျိုးလို လုပ်ပြနေတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေကို ဗိုလ်ချုပ်
ထိုင်းသံအမတ်ဟောင်း တဦးက အကဲဖြတ်
န၀တဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီး မကြာမီမှာ ညစဉ်ညတိုင်း
ဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းရဲ့ အရှိန်အ၀ါ
အန်အယ်လ်ဒီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူး
ကြီး သန်းရွှေဆီကို ၁၉၉၇ မတ်လအထိ စာတွေ
ရေးပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းနေပေမယ့်
ဗိုလ်သန်းရွှေကတော့ အန်အယ်လ်ဒီ လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဖမ်းဆီးပြီး အမျိုးသားညီ
လာခံကို စိတ်ကြိုက်ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ပါတယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ
ကို အမြဲတမ်းလျစ်လျူရှုထားပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်
န၀တ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး မကြာမီ တိုင်းမှူးတဦးဖြစ်တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးကို စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်
လိုက်တယ်။ အပြင်လောကမှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို
ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေးသမားလို့ ပြောဆို ရေးသား
တကယ်ကတော့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်မှာ ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်
မရှိပါဘူး။ ဗိုလ်သန်းရွှေသဘောမတူဘဲ ဘာမှလုပ်
လို့ မရပါဘူး။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအုပ်
စုဟာ နိုင်ငံခြားကို မမှန်တဲ့သတင်းတွေ ပေးလေ့ရှိ
ပါတယ်။ ဥပမာ ထောက်လှမ်းရေး ပြောသမျှယုံတဲ့
David Steinberg လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို သတင်းပေး
လေ့ရှိတယ်လို့ စစ်ဗိုလ်ဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်
ကြည် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ကို ရောက်ခဲ့ပေ
မယ့် ဗိုလ်ခင်ညွန့်မှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတာ ထင်
ရှားတယ်လို့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူ ကုလ
သမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် ရာဇာလီက ပြောပါ
တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် ယိုဇို
ဘ၀က တက်လာသူဖြစ်တာမို့ ဗိုလ်နေ၀င်းသေ
တာနဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်က ကံကုန်တော့တာပဲလို့ ဆို
မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်မှာ
နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက် ရှိတဲ့အတွက် ဗိုလ်သန်းရွှေ
ကိုယ်စားလှယ် ရာဇာလီက ပြောပါတယ်တဲ့။
ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ သူ့အမိန့်ကို လုံးဝနာခဲ့တဲ့
တပည့်တွေကို ခန့်ထားတဲ့နည်းနဲ့ အာဏာ
လူယုံတွေကို မြှောက်စားပြီး မယုံကြည်သူတွေ
ကို ထုတ်ပစ်တဲ့နည်းပါပဲ။ ဗိုလ်နေ၀င်းကလည်း
ကို အာဏာသိမ်းရန် ကြံစည်မှုနဲ့ဖမ်းတဲ့အခါမှာ
ဗိုလ်နေ၀င်းပါ အကျယ်ချုပ်ဘ၀ကို ရောက်သွား
၂၀၀၂ ဒီဇင်ဘာမှာ ဗိုလ်နေ၀င်းသေတော့ စစ်မှုထမ်း
မှန်သမျှ မသာမပို့ရလို့ ဗိုလ်သန်းရွှေက အမိန့်ထုတ်
တယ်။ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရာမှာ ကျူပင်ခုတ်
ကျူငုတ်ပါမကျန်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အကုန်ရှင်း
ပစ်နိုင်တာကြောင့် တပ်တွင်းက အာဏာသိမ်းဖို့
ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲလို့ ဆိုတယ်။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အစိုးရဆီက ထွက်ပြေးသူ
ဦးရေဟာ တလမှာ အနည်းဆုံး (၁,၅၀၀) လောက်
၂၀၀၆ မေလက သြဂုတ်လအထိ (၄) လအတွင်း
တပ်သား ကိုးထောင်ကျော် ထွက်ပြေးကြတယ်။
က အိမ်ရှင် ဗိုလ်သန်းရွှေကစပြီး စကားပြောရမှာ
ဖြစ်ပေမယ့် စကားတလုံးမှ မပြောတဲ့အတွက် ဇွန်း
သံ ခက်ရင်းသံတွေပဲ ကြားနေရတယ်လို့ ဒေါ်အောင်
ဆန်းစုကြည်က ပြန်ပြောပါတယ်တဲ့။ ဒေါ်စုကို စကား
စပြောသူဟာ ဗိုလ်မောင်အေးဖြစ်ပြီး တောပြုန်းတဲ့
အာဏာရှိပေမယ့် ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်
ချက်ပေးနိုင်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို အခြေအနေ စောင့်
ကြည့်တာလို့ တချို့ကဆိုပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ
တာကိုကြည့်ရင် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုမရှိတာ သိသာ
တယ်လို့ ရန်ကုန်နေ လေ့လာသူတဦးက ပြောပြတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်လည်း သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် တန်ရုံ
မဟုတ်ဘဲ အလွန်အကျွံဖြစ်နေတတ်တာဟာ ဗိုလ်သန်း
ရွှေရဲ့ အကျင့်ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်မောင်အေးကို ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ ပြိုင်ဘက်
သာ စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်
Kentucky Fried Chicken စားရတဲ့
အကြောင်း ပြောဆိုနေတာကို ကြားလိုက်
ဗိုလ်မောင်အေးဟာ နံပါတ် (၂) နေရာယူထာ
ပေမယ့် နံပါတ် (၁) ကို မလှန်နိုင်သူဖြစ်တယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေ သေရင် ဗိုလ်မောင်အေး တက်လာ
နိုင်ပေမယ့် ဗိုလ်သန်းရွှေက အာဏာလွှဲပေးမယ့်
၁၉၉၃ မှာ တည်ထောင်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး
အသင်းဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်အသင်း
ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို တိုက်ခိုက်
ရာမှာ ဒီအသင်းကို သုံးပါတယ်။
လိုအပ်လာရင် ကြံ့ဖွံ့ကို ပြည်သူ့စစ်အဖြစ် အသုံးပြု
မယ်လို့လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌ
က ဗိုလ်သန်းရွှေဖြစ်တာမို့ ပါတီအဖြစ် အသွင်ပြောင်း
တဲ့အခါမှာလည်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဆက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်လို့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရင်
ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ မဆလအာဏာရှင်ခေတ်ကို ပြန်
ကြံ့ဖွံ့ လက်အောက်မှာ ရာဇ၀တ်သားတွေနဲ့
ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စွမ်းအားရှင်ဆိုတဲ့ လူမိုက်အဖွဲ့
ခြေနီအသင်း စတာတွေကိုလည်း ဗိုလ်သန်းရွှေ
ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ လက်သုံးတော် စီးပွားရေး
သမားတွေထဲမှာ တေဇ၊ ထွန်းမြင့်နိုင် (ခေါ်)
စတီဗင်လော၊ အောင်ကိုဝင်း၊ ဆပ်ခ်ျပန်း၊
မောင်ဝိတ်၊ ဌေးမြင့်၊ ခင်ရွှေ၊ ဇော်ဇော်၊
အိုက်ထွန်းနဲ့ ချစ်ခိုင်တို့က ထင်ရှားတယ်။
ဒီအထဲမှာ တေဇဟာ သြဇာအရှိန်အ၀ါ
သမီး မင်္ဂလာဆောင်ကို တေဇကပဲ အကုန်
အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်ရာ
မှာ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ တေဇကိုသာ တိုင်ပင်
တယ် လို့ သိရတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်က ဖန်တီးပေးတာ ထင်ရှား
တယ်။ အမိန့်နာခံမှုကို အဓိကထားတဲ့
သန်းရွှေ ရိုက်လိုက်တဲ့ ဂေါက်သီးဟာ ဘယ်ရောက်
မှန်း ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် သန်းရွှေ
ဘယ်လိုရိုက်ရိုက် သူ့ဂေါက်သီးဟာ ကျင်းနားမှာ
အမြဲရောက်နေတာ တွေ့ရတယ်လို့ အမေရိကန်
နေရာရွှေ့ပေးတဲ့အတွက် အမြဲတမ်း ကျင်းနား
မလိုက်နာဘဲ အာဏာပြတဲ့ မင်းဆိုးမင်းညစ်
၂၆ မတ် ၂၀၁၅။